Ny zava-mahadomelina tena voatendry isaky ny fanjakana any Etazonia amin'ny taona 2019 - Orinasa | Desambra 2021
Orinasa, Vaovao Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Pets Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Zava-Mahadomelina Vs. Namana Ny Fizahana Lalao Wellness Fahasalamana Orinasa, The Checkout Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Orinasa Mpanao Gazety News
Tena >> Orinasa >> Ny zava-mahadomelina tena voatendry isaky ny fanjakana amin'ny taona 2019
Ny zava-mahadomelina tena voatendry isaky ny fanjakana amin'ny taona 2019
Tamin'ny volana Aogositra dia noravanay ny zava-mahadomelina nomen'ny mpitsabo SingleCare fahita matetika , lisitra iray nanjakan'ny fanafody tosidra sy ny vitaminina D. Notsongainay izao fa mijery akaiky kokoa ireo fanafody voatendry indrindra amin'ny taona 2019-ary na dia maro aza no mihaona, dia misy fanampim-panazavana vaovao roa.
Ny tena manamarika kokoa anefa dia ity lisitry ny zava-mahadomelina ankehitriny ity milaza amintsika momba ny fampiasana fanafody fanafody manerana ny solaitrabe any Etazonia. Nahoana ny fanafody sasany no voatendry matetika kokoa noho ny hafa? Tsara sa ratsy ny lazan'ny zava-mahadomelina? Inona avy ireo toe-pahasalamana fahita indrindra amin'ny Amerikanina?
Mba hahitana ny valin'ireto fanontaniana ireto dia nanontany mpitsabo roa izahay handanjalanja ireo zava-mahadomelina malaza indrindra amin'ny taona ary hizara ny fahitany ny fironana. Ity no nolazain'izy ireo.
Generic vs. fanafody marika
Ny fanafody rehetra amin'ny lisitra 2019 ao amin'ny lisitra 2019 dia misy amin'ny endrika mahazatra, izay mahatonga azy ireo ho mora vidy sy mora azo, hoy i David Cutler, MD, dokotera momba ny fianakaviana ao amin'ny fianakaviana. Providence Saint John's Health Center .
Tsy ireo no zava-mahadomelina, blockbuster, fitadiavam-bola novakianao teo amin'ny pejy voalohany, hoy izy. Izy ireo no fanafody ao amin'ny kabinetran'ny fanafody rehetra.
Nahoana no misy dikany izany? Ho an'ny vao manomboka, ny fanafody marika marika dia mampiakatra ny vidin'ny marary tsy any am-paosy sy ny vidin'ny fiantohana ara-piarahamonina, hoy i Joshua Septimus, MD, internista ao amin'ny Metodista any Houston . Koa satria ny fanafody generika dia eken'ny besinimaro ho tsara toy ny marika marika ihany, ny fiovana mankany amin'ny prescription generic dia tsara.
Faly be aho mahita fa miala amin'ny fanafody marika ny dokotera satria nisy fotoana nanoratan'ny dokotera dokotera ho an'ny lafo be, hoy ny fanazavan'ny Dr. Septimus. Saingy ankehitriny dia medikaly ireo meday voatondro be mpampiasa, ary mora vidy izy ireo ary manana angona efa ela hatrizay.
Inona no ambaran'ny zava-mahadomelina tena ilaina?
Mahaliana fa ny fanafody voatendry indrindra amin'ny taona 2019 dia tafiditra ao anatin'ny sokajy mahazatra vitsivitsy: fanafody tosidra, fitsaboana tiroida, antibiotika ary fanafody ADHD.
Misy dikany izany, hoy ny Dr. Septimus, satria ny fiakaran'ny tosi-dra sy ny hypothyroidism dia roa amin'ireo aretina mahazatra indrindra amin'ny olon-dehibe. Raha ny fanafody hafa? Ny antibiotika spektrum Broad-spectrum dia mety ho malaza foana satria marary hatrany ny olona ary mila fitsaboana, ary ny lisitra dia feno fanafody vitsivitsy mahazatra toy ny steroid sy ny fanafody mampiahiahy.
Te hahafantatra misimisy kokoa momba ny fanafody voatendry indrindra amin'ny taona 2019, araka ny angon-drakitry ny SingleCare (angamba ny iray raisinao dia ao anaty lisitra!) Sa mahita ny fanafody mahazatra indrindra amin'ny fanjakanao amin'ity taona ity? Vakio ny fihenan'ny zava-mahadomelina ataontsika.
Inona no fanafody tena voatendry?
Amlodipine (generika Norvasc) sy lisinopril (generic Zestril, na Prinivil)
Sodothyroxine sodium sy Synthroid
Amphetamine-dextroamphetamine (generika Adderall)
Alprazolam (generika Xanax)
Amlodipine sy lisinopril
Voatendry ho an'ny: Tosidra ambony
Fandraisana an-tserasera malaza indrindra ao: Alaska, Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, Nevada, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Virginia, Vermont, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming
Ny tosidra ambony dia aretina mahazatra izay tsaboina mora foana, ary misy tombony lehibe azo amin'ny fifehezana azy-ao anatin'izany ny fihenan'ny risika amin'ny aretim-po sy ny lalan-dra, hoy ny Dr. Cutler. Ary tsy izany ihany no antony mahatonga ny mpitsabo amin'ny tosidra amlodipine SY lisinopril dia malaza be izao, koa.
Ny mari-pahaizana momba ny diagnostika mamaritra ny olona manana fiakaran'ny tosidrà dia nampidinina, ary nahatonga olona maro ho sokajina ho voan'ny tosidra ambony, hoy ny fanazavan'i Dr. Cutler.
Izy dia miresaka a Fanavaozana 2017 ny torolàlana napetraka tamin'ny 2003; ny American College of Cardiology sy ny American Heart Association dia nanala sokajy prehypertension ary nandamina fanasokajiana dingana hafa ho an'ny fiakaran'ny tosidra. Tombanana fa ity fanovana ity dia hanasokajiana olona maro kokoa ho voan'ny tosidra, indrindra ireo tanora antitra, ary mety hitarika fidirana an-tsehatra mialoha.
Hatramin'ireto fanafody roa ireto dia nilaza i Dr. Septimus fa ny mpanakana ny ACE (toy ny lisinopril) sy ny mpanakana ny fantson'ny kalsioma (toy ny amlodipine) dia fomba azo ekena hitsaboana tosidra ambony, miaraka amlodipine ho fanafody mora ampiasaina amin'ny lafiny ambany vokatry ary lisinopril safidy azo antoka kokoa ho an'ireo olona manana diabeta na aretim-po koa.
Voatendry ho an'ny: Aretin'ny bakteria amin'ny sofina, orona ary tenda
Reseta malaza indrindra ao: California, Washington, D.C., Maryland, New Jersey, Texas
Dr. antso fahafito amoxicillin fitsaboana eo am-pototry ny aretin'ny taovam-pisefoana, ao anatin'izany ny aretin-tsofina sy ny tenda, izay manampy amin'ny fanazavana ny antony nahatonga azy io ho zava-mahadomelina malaza indrindra amin'ny fanjakana efatra tamin'ity taona ity.
Raha mijery ny toerana anoratana ny ankamaroan'ny soritr'aretina antibiotika ianao, dia an'ny ankizy izany, satria matetika izy ireo no voatsabo matetika noho ireo toe-javatra ireo, hoy izy.
Na iza na iza nandany fotoana be manodidina ny ankizy dia mahalala fa andevon'ny virus sy ny aretina izy, dia mbola misy ahiahy ihany eo amin'ireo mpitsabo momba ny tahan'ny voatendry antibiotika — indrindra rehefa ampiasaina hitsaboana areti-mifindra fa tsy otrikaretina, izay mandray anjara. amin'ny fiakaran'ny tahan'ny fanoherana antibiotika.
Betsaka ny ezaka atao mba hampihenana ny fampidirana antibiotika tsy ilaina fitantanan-draharaha fandaharana, hoy i Dr. Cutler. Ny olona dia mila ampandrenesina bebe kokoa ny loza ateraky ny fampiasana antibiotika be loatra, tsy ilaina ary manimba.
Voatendry ho an'ny: Hypothyroidism
Reseta malaza indrindra ao: Arizona, Colorado, Florida, Idaho, Montana, Oregon, Puerto Rico, Nosy Virgin
Ny hypothyroidism, toe-javatra iray izay ijanonan'ny tiroida ny fanaovana hormonina ampy hifehezana ny fiasan'ny vatana, dia misy fiatraikany lehibe dimy amin'ny 100 amerikana 100 , isaky ny National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.
Ny fiasan'ny tiroida ambany dia matetika toe-javatra autoimmune tsy misy mpamono na fisorohana fantatra, hoy i Dr. Cutler, ary nampiany fa ny famantarana dia mety hosoka, toy ny havizanana na fitohanana. Ny olona voan'ny hypothyroidism dia mety hiaina fanaintainana miaraka na hozatra, hoditra maina, fadimbolana tsy ara-dalàna na fitomboan'ny lanja.
Sôdiôma Levothyroxine no fantatra amin'ny anarana hoe mpisolo tiroid, ary nilaza i Dr. Septimus fa malaza izy io satria tena tsy misy fanafody hafa afaka manolo ny hormonina tiroida very. Soa ihany fa nilaza ihany koa izy fa ny sodium levothyroxine dia manana taha ambony amin'ny fahombiazana ary manampy ny ankamaroan'ny marary mandray azy.
Voatendry ho an'ny: ADHD
Reseta malaza indrindra ao: Michigan, North Dakota, Rhode Island, Utah
Amphetamine-dextroamphetamine dia voatendry matetika amin'ny fitsaboana ny Soritr'aretina ADHD , izay mety miainga amin'ny hyperactivity sy ny fahasarotana mifantoka amin'ny fidgeting sy ny fitsarana ratsy, hoy ny Dr. Septimus. Miaraka amin'ny zava-misy fa betsaka ny olona voan'ny ADHD, anisan'izany ny ankizy kely , mitombo hatrany ny lazan'ity zava-mahadomelina ity satria amin'ny ankapobeny dia heverina ho azo antoka sy mandaitra izy io - ary efa misy amin'ny endrika ankapobeny.
Ny rafitra marina ny fomba amphetamine-dextroamphetamine manampy ny marary (ankoatry ny miasa ao amin'ny rafi-pitatitra foibe) dia tsy takatra tsara, fa araka ny Gazety ADDitude , ny fanafody dia nodinihina be nandritra ny am-polony taona maro ary toa tsy miteraka ahiahy lehibe amin'ny ankamaroan'ny marary mandray azy.
Ny any ivelany
Ny zava-mahadomelina sisa amin'ny lisitra 2019 dia tsy tafiditra amin'ireo sokajy voalaza etsy ambony ireo, fa no zava-mahadomelina voalaza voalohany ao amin'ny fanjakan'izy ireo.
Voatendry ho an'ny: Tsy fahampiana vitamina D
Reseta malaza indrindra ao: New York
Prescription vitamina D. , ny fanafody ambony any New York, dia ampiasaina hitsaboana ny tsy fahampian'ny vitamina D. Saingy nilaza i Dr. Septimus fa ny nanoratana azy matetika dia manondro fa ny dokotera dia mbola mizaha haingana ny vitamina D, fomba fanao iray Vondron-draharaha misahana ny asa fanompoana amerikana mialoha Nanoro hevitra ny amin'ny. Na dia mety ilaina aza ny fihinanana vitamina D ho an'ny marary marary vitsivitsy (toy ireo izay manana osteoporosis), dia azo inoana fa omena tsy ilaina amin'ny tranga maro hafa.
Voatendry ho an'ny: mamaivay
Reseta malaza indrindra amin'ny: Maine
Ny famaritana lamina ho an'ny aretin'ny taovam-pisefoana toy ny bronchitis, pnemonia, ary sinusitis angamba no tena antony prednisone dia natontosa tany Maine tamin'ity taona ity. Kortikosteroid iray mitsabo aretim-panafody sy autoimmune isan-karazany, hoy ny Dr. Septimus fa ny dokotera sasany dia mora miantehitra kokoa aminy rehefa mitaraina ny fivontosana, fanaintainana, na tsy mahazo aina ny marary iray noho ny aretina mitaiza na maharitra. Ny fandraisana prednisone dia mety hitarika maromaro voka-dratsy , izay mihamafy hatrany rehefa ela ny fandraisanao azy, noho izany dia tsara fa tsy ampiasaina be loatra manerana ny firenena.
Voatendry ho an'ny: fanahiana
Reseta malaza indrindra amin'ny: Tennessee
Ho an'ny fanamaivanana haingana ireo soritr'aretina mifandraika amin'ny fanafihana mihorohoro na phobias, alprazolam dia voatendry matetika hanampiana ny olona hiatrika toe-javatra mahatsiravina toy ny mandeha fiaramanidina rehefa matahotra ny hisidina ianao. Raha Xanax dia azo omena fitaintainana maharitra , inhibitor serotonin reuptake (SSRI) na fanafody anti-tebiteby hafa no azo ampiasaina.
Raha ny antony mety malaza be ny alprazolam (Xanax), dia nilaza ny Dr. Septimus fa miasa haingana kokoa noho ny zava-mahadomelina hafa ao an-dakilasy izy, ka mahatonga azy io ho an'ny toe-javatra mitaky fanombohana haingana.
[Na izany aza], izany koa dia mahatonga ny fiankinan-doha mety ho avo lavitra kokoa, hoy izy mampitandrina. Zava-mahadomelina tsara izany raha ampiasaina soa aman-tsara, nefa tsara.
Voatendry ho an'ny: Fihenan'ny erectile
Reseta malaza indrindra any: Hawaii
vardenafil , a.k.a. ny pilina tsy mahomby erectile levitra , no zava-mahadomelina voalaza farany ambony tany Hawaii tamin'ity taona ity. Amin'ny ankapobeny, fantatry ny manam-pahaizana fa matetika no voatendry ny sildenafil satria nahazo tombony tamin'ny a fihenam-bidy lehibe tamin'ny 2017 rehefa nanjary azo tamin'ny endrika mahazatra. Na dia mbola ampiasain'ny marary manankarena kokoa aza izy io miaraka amin'ny fividianana fanafody tsy ilaina, fialam-boly, ny vidin'ny vidiny ambany dia mamela ny marary mararin'ny fihenan'ny erectile hampiasa ilay fitsaboana.
Arizona: sodium an'ny Levothyroxine
Colorado: sodium Sodothyroxine
Washington, D.C .: Amoxicillin
Florida: sodium an'ny Levothyroxine
Idaho: sodium Sodothyroxine
Montana: sodium an'ny Levothyroxine
Carolina Avaratra: Lisinopril
Dakota Avaratra: Amphetamine-dextroamphetamine
New Jersey: Amoxicillin
New York: Vitamina D.
Oregon: sodium ao amin'ny Levothyroxine
Puerto Rico: Synthroid (marika marika ho an'ny sodium levothyroxine)
Rhode Island: Amphetamine-dextroamphetamine
South Carolina: Amlodipine
South Dakota: Lisinopril
Nosy virjina: sodium Levothyroxine
Virginia Andrefana: Lisinopril
Ny fampahalalana momba ny zava-mahadomelina malaza dia taratry ny script feno indrindra amin'ny SingleCare ho an'ny taona 2019, tsy anisany ireo opioid sy fanafody mampihena lanja.
Antontan'isa momba ny aretina Bipolar 2021
inona no dikan'ny ivelan'ny tambajotra
mandra-pahoviana no hanary uti voajanahary
manampy rano fisotro masirasira ve ny rano fisotro?
azonao esorina ao an-trano ve ny uti
azonao ampiasaina miaraka ve ny tylenol sy ibuprofen?
dia mitovy ny mobic sy meloxicam